I-Fitpolo H701 Fitness Tracker nguMvelisi waseTshayina iMOKOSmart
Ekhaya » I-Fitpolo H701 Fitness Tracker nguMvelisi waseTshayina iMOKOSmart
Ukubeka iliso ngokuchanekileyo kwentliziyo
Ulawulo lokuhamba ngenzululwazi.
Ukubeka iliso kwentliziyo
Ukuxhotyiswa ngenzwa yokubona kwentliziyo, 24-iyure iliso ngokuzenzekelayo utshintsho lwezinga lentliziyo, ukusetyenziswa kwerekhodi, vavanya inqanaba lezempilo, kwaye uphucule ukomelela kwakho ngokomzimba.
Inzwa yomxhuzulane eyakhelweyo, zichonge ngokuzenzekelayo kwaye ubale amanyathelo akho ngelixa usenza umthambo, ngokumisela iinjongo kuya kukunceda ukuba uphucule inqanaba lakho lempilo.
Jonga ngokuzenzekelayo imeko yakho yokulala ebusuku,manani ixesha lakho lokulala kwaye uhlalutye umgangatho wakho wokulala, nge-histogram eboniswe kwi-APP ukukunceda uqonde ngcono umgangatho wokulala.
Isandi seAlarm Clock
Ungaseta isikhumbuzi sealam, ukuvusa ngokungcangcazela, ukunqanda ukuphazamisa usapho lonke..
Kwimeko apho isongo linqamleze i-APP, iya kudlidliza ukukukhumbuza umnxeba ongenayo, qiniseka ukuba awuyi kuphoswa nayiphina ifowuni ebalulekileyo ngaphandle kwengxolo okanye nokuba ifowuni yakho ifakwe ebhakeni.
I-H701 yongeze umsebenzi wokuhlala isikhumbuzi, xa uhleli eofisini okanye ufunda ixesha elide, isongo siya kukukhumbuza ukuba ume kwaye usebenze, wolule umzimba kwaye uphefumle umoya omtsha.
Uthuli kunye nokungena manzi
Ukungena manzi kwemihla ngemihla ngaphandle kwexhala, unokuntywiliselwa emanzini ixesha elincinci kubushushu begumbi kunye noxinzelelo, ukunxiba mihla le, ukubila, Hlamba izandla zakho ngaphandle kokususa isongo.
Igama lemveliso : I-Fitpolo H701 yokuQiniseka koMzimba
Iqondo lobushushu lokusebenza : -20° C ~ 45 ° C
Uhlobo lwebhetri iPolymer : Ibhetri ye-Li-ion
Umthamo webhetri : 100mAh
Bonisa isikrini : 0.49" UNGU
Unxibelelwano olungenazingcingo : ibluetooth 4.0 WABA
Iimpawu eziphambili : Ukubeka iliso kwintliziyo Ukujonga ukulala Ukujonga ezemidlalo Ukujonga umnxeba Isaziso somyalezo wesaziso Ixesha lokubonisa Iwotshi Isikhumbuzo sokuhlala Isenzo sokulahleka
Inqanaba manzi : IP67
Iimfuno ze-OS : I-Android 4.3 kunye ne-IOS 8.3 okanye ngaphezulu kweenguqulelo ziyaxhaswa.
Ubomi bakho bungaphezu kombala omnye
Ifashoni kunye nemulticolor ziyenza imangalisa ngakumbi kwaye ibe yeyakho.